Kaabaj - Howling Pixel
Halkan waxaa laga soo toosiyay boga "faxfax"Maraq (Af-Ingiriis: soup; Af-Carabi: حساء) sidoo kale loo yaqano Faxfax waa dareere ka mid ah cuntada dadka taasi oo ka samaysan biyo, khudaar, midho, hilib, xawaash iyo noocyo kale oo geedo ah.
Maraqu waa cunto la diyaariyo, waxa sida badan laga sameeyaa iskudarka biyo, khudaar (barandho, basal, tamaandho, kaabaj, toonta iwm), hilib (sida hilibka xoolaha, digaaga iyo kaluunka), xawaash iyo noocyo kale oo midho iyo khudaar ah. Maraqa waxaa lagu kariyaa dheri ama digsi si loo helo dhadhan fiican wuxuu qaataa xoogaa wakhti ah.
Sida caadiga ah, maraqa waxaa loo qeybiyaa labo nooc: maraq fudud iyo maraq culus. Maraqa fudud waa mid ka sameeysan biyo iyo xoogaa yar oo khudaar ah, isla markaana qaata wakhti aad u kooban. Halka maraqa culus ka sameeysan yahay hilib, khudaar badan iyo xawaash kala duwan.Maraqa kaligiis waa la cabi karaa, sidoo kale waxaa lagu darsadaa cuntada. Marar badan waxaa lagu cunaa rootida, canjeeroda, sabaayada iyo noocyada kale ee cuntada ah.